Aarthik Abhiyan:शेयर / बैङ्किङ गतिविधि
रावा र हेफरबीच कर्जा सहकार्य सम्झौता
काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र हेफर इन्टरनेशनल नेपालबीच बुधवार सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । हेफर इन्टरनेशनलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. महेन्द्रनाथ लोहनीको उपस्थितिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक ड...
झापा र इलाम मालपोतमा प्रभुको एक्स्टेन्शन काउन्टर
काठमाडौं (अस) । प्रभु बैंकले झापाको दमक नगरपालिकास्थित मालपोत कार्यालय र इलामको मालपोत कार्यालयमा एक्स्टेन्शन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । दमकस्थित मालपोत कार्यालय परिसरमा स्थापित एक्स्टेन्शन काउन्टरको उद्घाटन भदौ १ गते झापा मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख चण्डिप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । त्यस्त...
सनराइज र सिद्धार्थबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । सनराइज बैंक र सिद्धार्थ क्यापिटलबीच ऋणपत्र निष्कासनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार सिद्धार्थ क्यापिटललाई ‘सनराइज ऋणपत्र २०८३’ को ऋणपत्र ट्रस्टी र विक्री प्रबन्धकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नेगरी १० दशमलव २५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजद...
एनबीआई र युनाइटेड फाइनान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) र युनाइटेड फाइनान्सबीच बुधवार तालीम सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार एनबीआईले युनाईटेड फाइनान्सका कर्मचारीको कार्यदक्षता विकासका लागि विभिन्न तालीम गर्नेछ । सम्झौतामा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्र र...
सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा हस्ताक्षर
काठमाडौं (अस) । सिप्रदी टेड्रिङले एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । सिप्रदी नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक हो । काठमाडौंस्थित सिप्रदी टेड्रिङको मुख्य कार्यालयमा आयोजित समा...
माछापुच्छ्रे बैंकको बारामा तीन शाखा
बारा (अस) । माछापुच्छ्रे बैंकले बारामा तीनओटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बाराको सिमरा, कलैया र निजगढमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सिमरा शाखाको मंगलवार जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले उद्घाटन गरे । त्यस्तै कलैया शाखाको कलैया उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेश यादव र निजगढ शाखको...
रावा बैंक र ग्रामीण उद्यमबीच सम्झौता
काठमाडौं (अस) । राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैंक र नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाका निमित्...
एनआईसीको ब्यालेन्स फन्ड एकाइ विक्री भदौ ५ सम्म
काठमाडौं (अस) । एनआईसी एशिया बैंक म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित दोस्रो बन्दमुखी योजना एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फन्डको एकाइ निष्कासन तथा विक्री भदौ ५ गतेसम्म मात्र हुने भएको छ । उक्त ब्यालेन्स फन्डको एकाइ खरीद गर्न चाहने व्यक्ति तथा संघ÷संस्थाले अन्तिम मितिसम्म आफ्नो सी–आस्बा खात...
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि सेञ्चुरीको बैंक ग्यारेन्टी सुविधा
काठमाडौं (अस) । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को २०७५ फागुन १९ मा गरिएको संशोधनबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अन्तर्गत बैंकले रू. १ करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी पाँच वर्षको लागि जारी गर्ने बताएको छ । यसमा नगद मा...
यातायात कार्यालयमा मेगा बैंकको एक्स्टेन्शन काउन्टर
काठमाडौँ (अस) । मेगा बैंकले काठमाडौंको स्वयम्भू, ठूलो भ¥याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा एक्स्टेन्शन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमवार मेगा बैंकका नायब महाप्रबन्धक तुलसीराम पोखरेल र यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङका कार्यालय प्रमुख कमला थापाले उक्त काउन्टरको उद्घाट...